အယ်ဒီတာအာဘော် | Page 3
တရုတ်ရေနံပိုက်လိုင်း စီမံကိန်းကြောင့် ကျောက်ဖြူပင်လယ်ပြင်တ၀ိုက်တွင် ရေထုညစ်ညမ်းမှုများ ဖြစ်လာပါက မည်သူတို့မှ တာဝန်ယူဖြေရှင်းကြမည်နည်း
ကျောက်ဖြူ မဒေးကျွန်းဧရိယာအတွင်း ပင်လယ်ပြင်ရေထုမှာ သုံးမိုင်ကျော်အထိ ညစ်ညမ်းနေသည်ဟု တွေ့ရှိသဖြင့် ဒေသအာဏာပိုင်များနှင့် တရုတ် CNPC ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ စုံစမ်းစစ်ဆေးနေသည်ဟု သတင်းများထွက်ပေါ်နေသည်။
ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါး ပြဿနာ
မူးယစ်ဆေးဝါးဟုဆိုလျှင် ဘိန်း (Opium)၊ ဘိန်းဖြူ (Heroin)၊ ဆေးခြောက်၊ (Cannabis) အက်စ်တက်စီ (Ecstasy)၊ စိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေးပြား(Amphetamine Type Stimulant)၊ အိုက်စ် (Ice) စသည့် အမျိုးအစားများ အပြင် တစ်ခြားသော မူးယစ်ဆေးဝါး များစွာရှိနေသေးသည်။ မည်သည့် မူးယစ်ဆေးဝါးမျှ လူသားမျိုးနွယ်အတွက် ကောင်းကျိုးပေးသည့် အမျိုးအစားများမဟုတ်ကြသလို မိမိတို့၏ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူသားမျိုးနွယ်တစ်ခုလုံးကို အမြဲတမ်းလိုလို ငြိမ်းခြောက်လျှက်ရှိသည်။ ယနေ့ မိမိတို့ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်လည်း စိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေးပြား မြောက်မြားစွာကို မကြာခဏဆိုသလို ဖမ်းဆီးရမိနေမှုကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် ရခိုင်လူမျိုးများအပေါ် မူယစ်ဆေးဝါး အန္တာရယ်မည်မျှ ခြိမ်းခြောက်နေသည်ကို အထူးသတိပြုရမည့် အခြေအနေပင်ဖြစ်သည်။
ပြည်သူတွေ နိုင်ငံရေးပါတီတွေကို ယုံလို့ရသေးလား
လွှတ်တော်သို့ရောက်သွားတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေကို ပြည်သူတွေ ယုံလို့ရသေးလား မေးခွန်းက အရမ်းအရေးကြီးနေပါပြီ။ ပြည်သူတွေကတော့ အသဲကြားက မဲတပြားကို ပါတီရော၊ လူရော ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ ထည့်ပေးလိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြည်သူတွေကတော့ ဒုံရင်းမှာဒုံရင်းပဲ၊ ဘာမှပြောင်းလဲသွားတာ မရှိသေးဘူး။
With inconsolable grief, we suffer from the fact that7young Arakanese (Rakhine) people were dead and 12 other injured in the violent act of the security forces in Mrauk-U, Arakan (Rakhine) State duringapublic protest on the 16th January 2018. Similarly, the detention of Wai Hun Aung,apublic figure and writer, and the charges against Dr. Aye Maung,aRakhine national leader under the so-called State Treason Law and the Unlawful Associations Act, is provoking the outrage of Arakanese people. This may lead toamassive political movement and major protests.
စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့ DTV Daily News
ကြားဝင်စေ့စပ်ပေးနိုင်မည့်သူရှိက သုံ့ပန်းချင်းလဲလှယ်လိုကြောင်း AA ပြော
ချင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဝှေ့တင်းကိုလွှတ်ပေးရန် ချင်းအဖွဲ့အစည်း (၄၀) ကျော် ပူးတွဲတောင်းဆို
မြေပုံမြို့နယ် ရွာသာယာကျေးရွာသား ၅ ဦးကို တပ်မတော်ကဖမ်းဆီးထား
အချုပ်ကားယာဉ်တန်း မိုင်းဆွဲခံရမှုကြောင့် ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် သစ်တောရွာကျေးရွာသားများ သတိပေးခံရ
မြေပုံတွင် တပ်မတော်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် အမျိုးသမီးတစ်ဦးသေဆုံးဟုဆို